#ZimbabweansMustFall : Campaign Against Zimabweans Goes Viral
By Tsepo R Dlamini	 On Jun 22, 2020 2 minute read
The originator of the hash tag #ZimbabweansMustFall is one Lerato Pillay who boasts a following of over 57 000 followers on her Twitter account. What is of concern in the virality of the #ZimbabweansMustFall trend. Many South Africans supported the sentiments and shared harrowing details of how Zimbabweans in South Africa have resorted to crime, mostly the undocumented ones, iHarare reports
A file photo of Xenophobia violence in South Africa. #ZimbabweansMustFall
Zimbabweans must fall article first appeared on iHarare.
Zenande Mfenyana Changes Her Mind On The Fergusons
#ZimbabweansMustFallZimbabweans must fall